Mividy O-neck Embroidery Cartoon Dog Tank Vest Little Girl Dress - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
O-Neck Embroidery Cartoon Dog Tank Vest Little Girl Akanjo
Manga / 2T Manga / 3T Manga / 4T Blue / 6 Blue / 8 Blue / 10
O-neck Embroidery Cartoon Dog Tank Vest Little Girl Dress - Manga / 2T tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Lovan'ny lamaody: voninkazo amboradora voninkazo
Vokatra: Akanjo akanjo lava mifono alika miaraka amin'ny bokotra O-Neck Baby Girls Kids Denim Dress
Loko: Denim Blue
(* 2) cm soroka
2T = 2 Taona 90 90 44 29 24 --
3T = 3 Taona 100 100 47 31 25 --
4T = 4 Taona 110 110 49 32 26 --
6T = 6 Taona 120 120 52 34 28 --
8T = 8 Taona 130 130 55 36 29 --
10T = 10 Taona 140 140 58 38 31 --
Sarafan mahia manify amin'ny fahavaratra, vita amin'ny lamba landihazo.
Toy ny famaritana, misaotra
Ny akanjo dia tsara tarehy, amboradara sy bokotra, fa teo ny fofona. Avy hatrany amin'ny fanasana. Ilay zazavavy 4 taona katroka, habe 8 toa ny tadiavina ihany, tsy tery.